अख्तियारको प्रमुख बन्न राई र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा, आयल निगमको घोटालामा मुछिएका थिए राई
काठमाडौं । संसद नियमावली पास भएर प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी सिफारिस भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तका लागि पूर्व मुख्य सचिव एवम् चीनका लागि नेपालका राजदूत लिलामणी पौडेल, गृह सचिव प्रेमकुमार राई र पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको नाम चर्चामा रहेको छ । यो खबर यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
यता, पूर्व महान्यायधिवक्ता युवराज संग्रौलाले पनि आयोगमा नियुक्तिका लागि दाबी गरेका छन् भने पूर्व मुख्यसचिव राजकिशोर क्षत्रीले पनि प्रमुख आयुक्त बन्न चलखेल गरिरहेका छन् ।
तर, यी दुईको संभावना अत्यन्तै न्यून छ । त्यसो त कामु प्रमुख आयुक्त रहेका घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त बनाउनु पर्ने माग पनि नेकपा भित्रबाट उठेको छ ।
घिमिरे नै प्रमुख आयुक्त बनेको खण्डमा आयुक्तको एक पद खाली हुने देखिन्छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा पूर्व एआईजी केशरीराज घिमिरे, पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदी र अख्तियार कै पूर्व सचिव श्रीधर सापकोटा आयुक्त बन्न लबिङमा जुटेका छन् । पूर्व एआईजी घिमिरे प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन् ।
प्रमुख आयुक्त पदको दौडमा रहेका गृहसचिव राई टंकमणी शर्माको शैलीमा नियुक्ति खान खोजिरहेका छन् । प्रधामन्त्री कार्यालयमा सचिव रहेका बेला शर्मालाई एकैपटक बढुवा गरी महालेखा परिक्षकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
सोही शैलीमा राई अख्तियारमा जान खोजेका छन् । तर, राईका लागि प्रमुख आयुक्त पद नसुहाउने टिप्पणी हुन थालेको छ । राईकै कारण आजसम्म पनि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट भर्खरै राजीनामा दिएका गोपाल खड्काको भ्रष्टाचार छानविन हुन सकिरहेको छैन ।
राई आपूर्ति सचिव हुँदा आयल निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही, झापालगायतका जिल्लामा डेढ अर्व भन्दा बढिको जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा खरिदको घोटलामा मुछिएका थिए, कार्यकारी निर्देशक खड्का । जग्गा खरिदका लागि निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए, उनै राई ।
कार्यान्वयन गर्ने खड्का भ्रष्टाचारमा तानिए तर निर्णय गर्ने राईमाथि भने कुनै छानविन भएन । अख्तियारको सचिवमा राई छँदा खड्कामाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि बढाउन समेत दिएका थिएनन् ।
त्यसको कारण हो आफूपनि तानिने डर । अख्तियारले अहिले पनि राइकै कारण खड्काको मुद्दालाई तामेलिमा राखेको छ । यसरी भ्रष्टाचारीलाई बचाउने राई आफै अख्तियारको प्रमुख बनेको खण्डमा कति भ्रष्टाचारीहरुले उन्मुक्ति पाउलान ? अख्तियार भित्रकै कर्मचारीहरु प्रश्न गर्छन् ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ३१, २०७५०७:४१
हारलाई अस्वीकार, गुटलाई मलजल : पौडेल समूहलाई ठेगान लगाउन देउवाले जन्माए अर्को समूह
जाडोका लागि मागिएको प्रहरीको ज्याकेट बैशाखमा आउँछ
मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको भिसा च्यातिएपछि भ्रमण नै रद्द
विमानभित्रै नेपाली यात्रुले यस्तो हर्कत गरेपछि दुबईबाट काठमाडौं आएको विमान दिल्लीमा आकस्मिक अवतरण !
एनसेल अर्थमन्त्री हटाउने चलखेलमा, ६५ अर्व लाभकर असुुल्न सरकार कठोर
१० वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि विभत्स हत्या, आमाको विलौना – ‘मेरी फूलजस्ती छोरीको परान कुन पापीले लयो ?’
१३ घण्टा अगाडि PS